डा. बाबुराम भट्टराई एकाएक अस्पताल भर्ना, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ? — Imandarmedia.com
डा. बाबुराम भट्टराई एकाएक अस्पताल भर्ना, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं । मुटुमा समस्या भएको महशुस भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई बुधबार राति बाँसबारीस्थित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा भर्ना भएका छन् ।
राति ७ बजे अस्पताल पुगेका भट्टराईको एन्जियोग्राफ्री लगायतको परीक्षण गरिएको छ । प्रारम्भीक सबै परीक्षण ठीकठाक देखिएपछि उनलाई आजै डिस्चार्जको तयारी भएको उनका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘डा. साब ब्याक पेन र मुटुमा असजिलो भएपछि अस्पताल आउनुभएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘सबै ठीकठाक देखिएकाले आजै घर जाने तयारीमा छौं ।’
भट्टराईको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। चन्द्रमणि अधिकारीसहितको टोलीले उपचार गरेको थियो । उनलाई चिकित्सकहरुले मसल पेन भनेका छन् । यद्यपि उनको मुटुको चाल चिकित्सकको निगरानीमा राखेर अध्ययन गरिदै छ ।
यदि तपाईं राजधानीका निजी अस्पताल छिर्दै हुनुहुन्छ भने ढोकैका ज्वरो नाप्ने, स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नुपर्ने (स्क्रिनिङ) हुन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोक्न राजधानीका अधिकांश निजी अस्पताल छिर्नुअघि स्वास्थ्यकर्मीले थर्मल गनमार्फत ज्वरो नापिरहेका छन् ।
लक्षण देखिएका व्यक्तिका लागि अस्पतालले दिनभरि राख्न मिल्ने छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नआएसम्मका लागि लक्षण भएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र टेकु अस्पतालसँग समन्वय गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
कुनै बिरामीमा कोभिड रिपोर्ट पोजिटिभ नै आए पनि अस्पतालमा आइसोलेसन र आईसीयूसमेतको व्यवस्था भएको उनले बताए । चीन या संक्रमण फैलिएको देशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षण देखिए अस्पतालले विशेष निगरानीमा राख्ने गरेको छ । शंकास्पद तर रिपोर्ट नेगेभिट आएका व्यक्तिलाई घरमै आइसोलेसन भएर बस्ने तरिका सिकाएर पठाउने गरेको छ ।
ग्रान्डीमा हालसम्म दुई जना व्यक्ति शंकास्पद भेटिएका छन् । ‘उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेभिट आयो तर इन्फ्लुएन्जा संक्रमण कारणले श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर आईसीयूमै राख्नुपर्ने भएको थियो’ अस्पतालकी संक्रमण नियन्त्रण कमिटीकी नर्स रोशनी राणाले भनिन्, ‘महिला बिरामी भने जापान गएर आउनुभएको रहेछ ।’
उनले सरकारको सहयोग भए संक्रमण नियन्त्रणमा निजीले अझै पहल गर्ने बताइन । सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा पनि ज्वरो नापेपछि मात्रै भित्र छिर्न पाइन्छ । कोरोना रेस्पोन्स टिम बनाई आइसोलेसन क्षेत्र छुट्याएर संक्रमण रोक्न प्रयास गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालको गेटमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ ।
अस्पतालमा कोभिड १९ बिरामी उपचारका लागि कोठासमेत छुट्याइएको अस्पताल व्यवस्थापक विनोद अधिकारीले बताए । ‘शंकास्पद कोही व्यक्ति भेटिएमा राख्न आइसोलेसन पनि छ,’ उनले भने, ‘टेकुबाट रिपोर्ट नआउँदासम्म उनीहरू त्यहीं बस्नुपर्छ ।’ नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पस्नुअघि ज्वरो नापिन्छ ।
कोभिडसँग मिल्दोजिल्दो लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाउने गरेको अस्पतालका व्यवस्थापक विजय रिमालले बताए । लक्षण देखिएका व्यक्ति स्याम्पल लिएर टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउने गरेको छ । ‘रिपोर्ट नआउँदासम्म बिरामीलाई आइसोलेसन गर्छौं,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट पोजेटिभ आइहाल्यो भने टेकु अस्पताल नै पठाउने निर्णयगरिएको छ ।’